Teboka vavaka hanoherana ny fanafihana ratsy | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny fanafihana ratsy
Teboka vavaka hanoherana ny fanafihana ratsy
Androany isika dia hirotsaka amin'ny teboka vavaka hanoherana ny fanafihana ratsy. Tian'Andriamanitra ny handrava ny fanafihana ratsy rehetra amin'ny fiainantsika mba hananantsika fiainana tsara kokoa. Betsaka ny olona naratra mafy avy tamin'ny devoly; ny fianan'izy ireo dia tsy nahalala fahasambarana noho ny andiam-panafihana mahatsiravina nataon'ny fahavalo. Tsy mahagaga raha nanoro hevitra ny soratra masina fa mivavaka mandrakariva isika satria ny fahavalontsika dia toy ny liona mierona mitady izay harapany.
Nanafika ny ain'i Joba ny fahavalo, nefa nahatoky Andriamanitra ka namonjy azy. Tokony ho takatrao fa indraindray na dia ny havanao akaiky indrindra amin'ny sakaiza aza dia mety ho fitaovana eo am-pelatanan'ny devoly hamelezana fanafihana mahatsiravina amin'ny fiainanao. Raha ny amin'i Josefa dia ny iray tam-po aminy no fitaovana ampiasain'ny devoly. Nanafika azy izy ireo noho ny nofiny, ary niezaka namono azy izy ireo talohan'ny nisehoan'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ainy.
Ny soratra masina dia nahatonga antsika hahatakatra fa ny fahavalo dia tsy tonga raha tsy mamono olona, ​​mangalatra ary mandringana. Noho izany, lasa lasibatra ho an'ny fahavalo ianao amin'ny andro hanaisanao an'i Kristy ho Tomponao sy mpamonjy anao manokana, ary raha manana fahaiza-manao lehibe eo aminao ianao dia ianao no lasibatra laharana voalohany. Tsy hampitahotra anao izany; tadidio fa milaza ny soratra masina fa maro ny fahorian'ny marina, nefa mahatoky Andriamanitra hamonjy azy amin'ny olona rehetra. Ny herin'ny matoatoa masina dia handrava ny fanafihana ratsy rehetra amin'ny fiainanao.
Rehefa manomboka mandalina ity torolàlana am-bavaka ity ianao dia ny anjelin'ny Tompo no hitarika anao ary hiomana hamono ny fanafihana ratsy rehetra amin'ny fiainanao izany.
Ray Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fahasoavanao tamin'ny fiainako. Misaotra anao aho satria tsy navelanao hihoatra ahy ny volan'ny fahavaloko. Avelao hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Ray Tompo ô, miatrika fanoherana ratsy ataon'ny fahavalo amin'ny fiainako rehetra aho. Mandringana ny fanafihana toy izany amin'ny afon'ny Masina aho.
Hoy ny soratra masina: ambarao zavatra, dia ho mafy orina. Manome didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny afon'ny Fanahy Masina dia manimba ny fanafihana ataon'ny fahavalo noho ny fiainako izay mandrahona ny aiko.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mampanantena ahy ny soratra masina fa ho famantarana sy fahagagana aho. Tompo ô, izay fanafihana rehetra te hanova izany fampanantenanao izany dia aringako amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
Raiko, mandà ny fiainako eo ambanin'ny fandrahonana ataon'ny fahavalo aho. Toheriko ny fanafihana rehetra ataoko amin'ny tafiky ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, potehiko ny fanafihana rehetra izay mikendry ny fahasalamako. Ny fanafihana rehetra hiteraka korontana amin'ny fahasalamako dia aringako amin'ny afon'ny Fanahy Masina.
Ray Tompo ô, ny soratra masina dia milaza fa ny vatako dia tempolin'ny Tompo; noho izany dia tsy misy aretina tokony hanoherana izany. Tojo fanoherana ny aretina rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ry Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hamoronana fikorontanana ao an-tobin'ny fahavaloko ianao, ary hataonao mamono tena amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo.
Andriamanitra Andriamanitra ô, miatrika fanoherana ratsy rehetra amin'ny fanambadiako aho. Ny soratra masina milaza izay nampiraisin'Andriamanitra, aza avela hisy hampisaraka. Tonga nanohitra ny fanafihana rehetra hampielezana ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, fianakaviako, anao Jesosy; noho izany, tsy tokony hanafika ny tranoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafihana ataon'ny fahavalo.
Ny fanafihana rehetra hiteraka korontana eo amin'ny vadiko sy ny vadiko dia aringako amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny biby demonia rehetra izay nirahina hampijaly ahy amin'ny fahoriana dia mirehitra ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Miantso ny afon'ny Fanahy Masina aho amin'ny alika ratsy rehetra izay nalefan'ny fahavalo hihinana ny fahombiazako, handoro afo amin'ny anaran'i Jesosy izao.
Ny bibilava demonia rehetra mitelina ny fahombiazako, dia may amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fanafihana rehetra amin'ny fahombiazako, ny ezaka rehetra ataon'ny fahavalo hahakivy ahy amin'ny fahombiazako, ny fanafihana rehetra hanelingelina ahy amin'ny fotoana ahombiazako. Aringako daholo ianareo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fanafihana ratsy rehetra ataon'ny zanako, hoy ny soratra masina, dia milaza famantarana sy fahagagana ny zanako. Ny fanafihana ataon'ny fahavalo azy ireo hamadika azy ireo ho antony mampalahelo ahy dia handrava izany fanafihana izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandidy aho fa manomboka izao, ny zanako dia homarihina amin'ny hatsarana amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, rehefa nanosotra an'i Daniela tamin'ny fanahin'ny fahatsarana ianao fa tonga zava-poana ny ezaka rehetra ataon'ny fahavalo hanakorontanana ny zava-bitany, dia mivavaka aho mba hosorananao ho zanako hanana fahamboniana amin'ny anaran'i Jesosy.
Horavako ny fanafihana ataon'ny fahavalo mba hampijaliana ny zanako amin'ny aretina mahatsiravina. Ny soratra masina dia milaza fa i Kristy dia nitondra ny fahalementsika rehetra teo aminy, ary nahasitrana ny aretintsika rehetra Izy. Ny fanafihana ataon'ny fahavalo amin'ny fahasalaman'ny zanako dia aringako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, ny fanafihana tsy fahombiazan'ny fiainako rehetra dia simbana amin'ny anaran'i Jesosy. Satria tsy nahomby i Kristy dia tsy ho diso amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ny fanafihana fahantrana amin'ny fiainako rehetra dia aringako amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
Manokatra ny vavahadim-be amin'ny fiainako androany amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Hoy ny soratra masina: Andriamanitra hanome izay rehetra ilaiko araka ny haren'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Mivavaka aho mba hanomezana izay ilaiko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, tonga hamely ny fahantrana aho. Tapahako ny ziogan'ny fanandevozana amin'ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko manomboka anio, avelao ny zava-manafika rehetra ataon'ny fahavalo ho tonga zava-poana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny lamin'ny mpianakavy ratsy
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fitafiana ratsy
Andinin-tsoratra masina 50 momba ny fahamarinana kjv
Ny fivavaha manohitra ny fifandraisana amin'ny razana
Vavaka hanoherana ny fahavalo tsy mibebaka